Kaningi, labo abenza ukutshalwa houseplants, bazibuze ukuthi kungani hhayi ukuqhakaza violets. Izizathu lesi simanga, kunezindlela eziningi. Ngakho musa nje ugxeka nabathengisi, ikutshela zonke mayelana violets, ukuthi badayisa eliphansi isitshalo. Isizathu, isibonelo, kungenzeka ukuthi ukuntula imali izakhi noma ngokweqile zikamanyolo, enhlabathini abampofu noma amanzi nokunye. Okwamanje, kunezinhlobo izinhlobonhlobo violets, zom unyaka wonke, bese kuba khona labo, kunalokho, isikhathi esiningi kokuphumula. Nokho, ukuntuleka izimbali phezu isitshalo noma kunjalo iyinkomba yokuthi okungalungile wayinakekela.
Kungani eziqhakaza violets? izizathu:
1. yimbangela ejwayelekile kakhulu kuyinto indawo ayilungile imbali. Uma kungenjalo ukukhanya okwanele, amahlamvu uzoqala ngokushesha wadonsa phezulu. Ukuze ukukhanya okukhulu violets kubaluleke kakhulu, kodwa akufanele uwafake khona, lapho elangeni.
2. Imibala kungenzeka ukuthi ingabi khona ngenxa ukuthambisa ngezikhathi ezithile, omiswe noma nenhlabathi amanzi, ukuniselwa ngamanzi abandayo noma kanzima.
3. Uma ukhathazekile, kungani musa eziqhakaza violets, kufanele kube njalo ngesonto ukuwondla umquba, okuyinto elakhelwe lezi zitshalo. Kodwa into - Ungeqisi it ne lemali nitrogen ne-potassium, njengoba lokhu ngeke nje kusilimaze simila.
4. Futhi ngokuvamile violets yokuqhuma ngenxa ukunciphisa ukukhanya ngosuku: ngosuku badinga amahora okungenani 12 yokukhanya yemvelo.
5. umswakama emoyeni kufanele kube-50% noma ngaphezulu.
6. Inhlabathi yokutshala izitshalo ezivela engadini asifanele, ngoba akukuniki uhlelo impande sikhule, futhi ngenxa yalokho ngeke eziqhakaza.
7. imbiza lapho ikhula imbali, hhayi usayizi olungile. Kungcono ukuzitshala simila ibe umthamo ibe banzi, njengoba violets like isikhala. Ezimweni ezinjalo, baqala eziqhakaza ngokushesha.
Kusukela zonke lezi zindlela osekukhulunywe singaqondile, singafinyelela eziphethweni mayelana nokuthi kungani musa eziqhakaza violets, nokuthi kufanele kuthathwe ukuza sikhathi. Okokuqala, kungcono ukubeka ebhodweni nge isitshalo ku window-30 cm kusukela ingilazi. kahle kakhulu, uma usayizi iwindi kuyoba enkulu. Amazinga best for isitshalo ubhekwa degrees 20, ngakho uma kushisa kakhulu, ingilazi kungcono ukufihla ezinye izinto. Ochwepheshe batusa ukubeka imbali ku window, ngemuva lapho izihlahla zikhule, awuvikele ukukhanya kakhulu. Ukunisela kumele zifane namanzi ngaphambi kokusebenzisa isidingo bavikela futhi kancane eshubile. Futhi kubalulekile ukuba zalisa inhlabathi kanye ngesonto.
Izinga nomswakama egumbini kungase zingalawulwa ngokusebenzisa humidifier isitsha ngamanzi noma amathawula ezimanzi ku Ukushisa amadivaysi. Ungafaka futhi ebhodweni nge imbali on the ithileyi, futhi ezansi wembozwe sphagnum olumanzi. Ngaphezu kwakho konke okungenhla, kumele uhlolele khona isitshalo izinambuzane izimpawu zezifo ezihlukahlukene. Endabeni isifo violet ukwelapha noma ukubulala, njengoba uma ungenjalo itheleleke nge nezinye izitshalo zasendlini.